မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: July 2008 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Posted by အာဇာနည် at 11:58 PM0comments
ရခိုင်လူငယ်များ၏ ၈၈၈၈ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ..အစီအစဉ်
8888 program in August 8, 2008
We, AASYC-BD would like to introduce concerning 8888 program that will hold on August 8, 08 in Dhaka leading by AASYC in cooperation with other alliance parties and including individual. Therefore we, All Arakan Students and Youths Congress want all of our colleagues to participate or join in the same day.
Since 1988 people uprising in Burma, where hundred of thousand of civilians were killed by brutal military junta crack downed across the country, so in this time of this year is very significant day of in Myanmar’s history around the world not to forget that people were blood in land and sacrificed. Many of demonstrators had to flee to neighboring countries like Thailand, Bangladesh and India including other countries and the rest of remaining protectors were arrested and many of them seriously tortured and put in Jail by the authorities of Burma military Junta.
Today is 20th Anniversary of the massacre of unarmed civilian’s bathes Military Regime of Burma, therefore the day of the occurred is deep concern to keep in mind and need to mobilized or awareness all over the world that who were working for pro-democracy movement inside and outside liberate areas, it would beagood program, reality if we will cooperate with together all our colleagues on the activities.
1. Immediately dialogues with political parties and including Daw Aung San Suu Kyi.
2. Stop the systematically use of rape by the Burmese military asapolitical weapon against the ethnic nationalities of Burma.
3. Immediately free political prisoners and allow their participation in the political process.
4. Provide humanitarian relief and assistance to the people of Burma especially ethnic nationalities areas.
5. Strengthen international sanctions and introduce new measures against the military until take concrete step to into political dialogues.
6. Re-affirm our commitment toa‘Tripartite Dialogues’ as the best means to achieve national reconciliation and democracy.
All the best All Arakan Students and Youth Congress
Contact- +8801817078133, 01745094646
Exiled pro-democracy activators.
Posted by အာဇာနည် at 11:13 PM0comments
သွေးစွန်းပန်းပွင့်များ၏ နှစ် ၂၀ ပြည့် ဒဏ္ဍာရီ..
47 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: 47
China: Authorities' broken promises jeopardize Olympic legacy
(Hong Kong) The Chinese authorities have broken their promise to improve the country's human rights situation and betrayed the core values of the Olympics, said Amnesty International inanew report published today, marking the 10 day countdown to the Games.
"By continuing to persecute and punish those who speak out for human rights, the Chinese authorities have lost sight of the promises they made when they were granted the Games seven years ago," said Roseann Rife, Asia-Pacific Deputy Director at Amnesty International atapress conference in Hong Kong.
Amnesty International' s report "The Olympics Countdown: Broken Promises" evaluates the performance of the Chinese authorities in four areas related to the core values of the Olympics: persecution of human rights activists, detention without trial, censorship and the death penalty.
The document concludes that in most of these areas human rights have continued to deteriorate in the run-up to the Olympics. In preparation for the Games, the Chinese authorities have locked up, put under house arrest, and forcibly removed individuals they perceive may threaten the image of `stability' and `harmony' they want to present to the world.
Human rights activist and writer Hu Jia continues to serve his sentence for "inciting subversion" by writing about human rights and giving interviews to foreign media. Hu Jia suffers from liver disease due toaHepatitis B infection but the authorities have prevented his family from providing him with medicine in the prison.
The International Olympic Committee (IOC) President, Jacques Rogge, recently claimed the IOC's their quiet diplomacy had led to several human rights reforms, including the new regulations for foreign media.
"Additionally, world leaders who attend the Games need to raise their voice publicly for human rights in China and in support of
individual Chinese human rights activists. A failure to do so will send the message that it is acceptable foragovernment to host the Olympic Games in an atmosphere of repression and persecution. "
Amnesty International' s report concluded that:
Many human rights defenders continue to be held in prisons across China and under house arrest; others are tightly monitored by police to ensure they will not disrupt the Olympics in any way.
The Chinese authorities have extended the use of punitive administrative detention – including
"Re-education through Labour" and "Enforced Drug Rehabilitation" – to "clean up" Beijing before the start of the Olympics and ensure activists stay out of sight during the Games.
Temporary media regulations that were supposed to allow greater freedom of reporting for foreign media have not been fully implemented. The Foreign Correspondents Club of China reported 260 cases of reporting interference since 1 January 2007. The regulations do not extend to Chinese journalists who continue to be prevented from
publishing stories on issues deemed sensitive by the government.
The death penalty continues to be used for some 68 crimes, including some non-violent crimes such as economic and drug-related offences. Despite assurances that the number of executions has dropped since the Supreme People's Court reinstated the review process, the Chinese authorities have not published actual figures.
Liu Jie,arural activist, was detained in Beijing and assigned to 18 months "Re-education through Labour" (RTL) in Heilongjiang province, northeast China, where local sources say she has been physically abused for having organizedapublic letter urging leaders to carry out political and legal reforms, including abolition of RTL.
In June 2008, the police detained Sichuan-based human rights activist Huang Qi on suspicion of "illegally acquiring state secrets".
Huang had been involved in assisting the families of five primary school pupils to bringalegal case against the local authorities. The five pupils died when the school buildings collapsed in the earthquake in Sichuan in May.
In 2001, when China was granted the hosting of the 2008 Olympic Games, Wang Wei, Secretary General of the Beijing Olympic Bid Committee said: "We will give the media complete freedom to report when they come to China. ( … ) We are confident that the Games coming to China not only promote our economy but also enhances all social conditions, including education, health and human rights."
A copy of the 18-page report " `People's Republic of China The Olympics Countdown – Broken Promises" will be available from Monday 28
July at 21:00 GMT on:
http://www.amnesty. org/en/library/ info/ASA17/ 089/2008/ en
Through The China Debate website (www.thechinadebate .org), Amnesty International hopes to raise awareness of human rights violations in China and promoteabalanced debate on how improvements can be achieved. In both English and Chinese, the site focuses on four human rights issues (detention without trial, censorship, death penalty,
repression of activists), will promote activism on human rights in China on Amnesty International' s global website (www.amnesty. org) as well as initiatives within its national offices.
At the time of bidding for the Olympics the Chinese authorities said that the Games would contribute to improving human rights in China. The International Olympic Committee [IOC] agreed. Amnesty International has been monitoring four key areas where human rights improvements are needed. Find out more on www.amnesty. org/en/china- olympics .
china Oly - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: china Oly
Posted by အာဇာနည် at 10:30 PM0comments
after storm - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: after storm
Posted by အာဇာနည် at 11:54 AM0comments
ပီကင်းက အိုလံပစ်..သွေးစွန်းတဲ့ နှစ်၂၀၀၈..
Posted by အာဇာနည် at 11:46 AM0comments
ခရီးဆုံးရောက်ပြီ..မိုင် ၃၀၀၀ ခရီးသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:27 AM0comments
ဒေါင်းအိုးဝေ တွန်သံသာဖို့ ..လာကြ ဒို့ အရေးကြွေးကြော်ကြစ်ို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:23 AM0comments
ကြိုင်ကြိုင် သောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ မြန်မာခလေး..သူများတွေထမင်းလာကြွေးနေရတယ်။ ရှက်ဖွယ်.
စေတနာရှင်..အမေရိကန်သမ္မတကတော် နှင့်အဖွဲ့ အား ဖဒိုကဲ့ သို့ အလုပ်ကြံ မခံရစေရန် မဲဆောက်ရှိ မျိုးချစ် မြန်မာများမှ လည်း ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးပါရန် မြန်မာနိူင်ငံသားများ၏ကိုယ်စား (ခြွင်းချက် နအဖ မပါ) အာဇာနည်မျိုးဆက်သစ်များမှ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ တိုးတက်ရေး ပိုမိုကူညီမှု ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အမေရိ ကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် လာမည့်လ (၇) ရက်နေ့တွင် မဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော် ဆေးခန်းသို့ လာရောက်မည် ဖြစ် သည်။
မယ်တော်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က “ကျမတို့ဆေးခန်းကို နောက်လ (၇) ရက်နေ့ လာမယ်။ မဲဆောက်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းကျောင်း တွေမှာ ဘော်ဒါ ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာ ကလေး (၁,၅၀၀) နဲ့ ပြည်တွင်းက ကလေး (၁,၀၀၀) အတွက် လော်ရာဘုရ်ှတို့အဖွဲ့က မနှစ်ကစပြီး ထောက်ပံ့ ကူညီမှု ပေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒီက အခြေအနေကို လာရောက်လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ တယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
၎င်းကလေးငယ်များအတွက် ထောက်ပံ့မှုများကို နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ (IRC) မှတဆင့် မယ် တော် ဆေးခန်းသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်စပ်နှင့် ပြည်တွင်းမှ အဆောင်နေ မြန်မာကလေးငယ်များ အ တွက် သူမတို့အဖွဲ့မှ ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မယ်တော်ဆေးခန်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။
လော်ရာဘုရှ်၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မဲဆောက်မြို့ပိုင် နိုင်ကော်ကယ်ကျူလားဖန်းက “အမေရိ ကန် သမ္မတကတော် (၇) ရက်နေ့ မဲဆောက်ကိုလာမယ်။ သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးလူ (၃၀) မနက်ဖြန် ရောက် ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်မှာဖြစ်တယ်” ဟု အတည်ပြု ပြောသည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပညာရေးကော်မတီ (BMWEC) ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာမ နော်ဖောရေ က “လာမယ့် (၇) ရက်နေ့ သူနဲ့တွေ့ရင် ရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးသင်ကြားမှု အနေအထား ကို ဒီလောက်နဲ့ မရပ်စေ ချင်ဘူး။ ဒီထက်ဆက်ပြီး ဆုံးခန်းတိုင် ပညာသင်ကြားခွင့် ရဖို့ဆိုတဲ့ အခွင့် အရေးကို ကူညီဖို့ တိုက်တွန်းမယ်” ဟု ပြောသည်။
မဲဆောက်ဒေသအတွင်း မဲဆောက်၊ မဲလမတ်၊ ဖို့ဖတ်၊ သုံးမြို့နယ်တွင် မြန်မာကလေးငယ်ရွှေ့ ပြောင်း စာသင် ကျောင်း (၅၄) ကျောင်းရှိပြီး ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာကလေးငယ် (၁၀,၀၀၀) ခန့် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်ဟု BMWEC ၏ စစ်တမ်းက ဖော်ပြထားသည်။ ။
ခွေးတွေ ကြောက်လို့ ပြေးရတဲ့ လူတွေ ခွေးသေ၀က်သေ..သေကုန်နေ။
ဒီလူတွေ က ဗမာပြည်မှာနေ..ကြာကြာလေ..ငတ်သေတော့မှာမို့ခွေးတောထဲက ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေး လာကြရရှာတယ် ဗျာ.
ခုတော့ ခွေးသေ ၀က်သေ သေရှာပြီ။ နောင်လည်း ဘယ်နှစ်ယောက်ထပ်သေကြဦးမလဲ။
တိုက်ပွဲခေါ်ကြဖို့လိုပြီ။ ကြောက်လေလေ..ဗမာ မျိုးတုန်းတော့မယ်။
နေ့ စဉ်..စားစရာမရှိလို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ တကွဲတပြားမိသားစုတွေ ဗမာမြေများ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလည်း.
သင်လည်းတစ်ဦး..ကျွန်ုပ်လည်း..တစ်ယောက် အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ချစ်ခင်သူနဲ့ကွေကွင်းရသော ဆင်းရဲ။ မချစ်မနှစ်သက်သောသူနဲ့ ပေါင်းဖေါ်နေရသောဆင်းရဲ ။ အားလုံးပိုင်ဆိုင်သော..ဘိုးဘွားအမွေ ကို မသမာသူများ..မောင်ပိုင်စီးထားသော ခံရခက် ဆင်းရဲဒုက္ခများကို..သင်၏သားသမီးများကို သင်ပေးခဲ့ လိုပါသလား.
သင်လက်ထက်တွင်..သင်မရဲက..သင်၏ ချစ်လှစွာသော..သားလေး သမီးလေးများသည်ဤသို့လူမသိ သူမသိ ခွေးသေ ၀က်သေသေရပေဦးမည်။
သင့်သမီးလေး၏ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ် စစ်သား၏ မစင်ကြယ်သော လူသတ်သွေးစွန်းလက်..တင်ရစ်ဦးမည်။
တိုက်ပွဲ စကြပါစို့ ..
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ သတ္တိသည်....ကျွန်ပ်တို့ အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဗျတ္တိသည်....ကျွန်ပ်တို့ အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ လုံ့ လသည်....ကျွန်ပ်တို့ အားလုံး ကယ်တင်ရေး အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်တူ တွန်းကြပါစို့ လား..ရွေ့ သွားနိူင်ပါသည်။ ဇွဲလုံလ..သစ္စာက သာမဏ္ဍိုင်ပါ။
Posted by အာဇာနည် at 12:44 AM0comments
မြန်မာသတင်း ဇူလိူင်လ ၃၀ ရက် ၂၀၀၈
Australia, Myanmar to be admitted as SAARC observers: Sri Lanka
Myanmar, China In Nickel Mining Deal - Report
Bush signs bill to increase US Myanmar sanctions
(AFX UK Focus) 2008-07-30 06:10 Top Thai court hits Thaksin over Myanmar loans
Myanmar aid losses 'unacceptable:' UN aid coordinator
UN says Myanmar goverment has been stealing aid
Myanmar aid losses unacceptable, says UN co-ordinator
Cash scam in Myanmar swallowing UN cyclone aid
Myanmar refugees head for new life
Posted by အာဇာနည် at 12:42 AM0comments
U NU Speech 1948 Jan 4
U NU Speech 1948 Jan4- UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: U NU Speech 1948 Jan 4
စေ တ နာ မ မှန် သော တံ ခါး ပိတ် ခြင်း ။
( ပြည် ပ အား ကိုး ပု ဆိန် ရိုး ။ အ ဆိုး မြင် ၀ါ ဒီ များ ကို ဆန့်ကျင် ကြ ) ။
နေ့တိုင်း ကြား နေ ရ သော ဒီ အ သံ ။ ရေ ဒီ ယို ပဲ ဖွင့် ဖွင့် ၊ တီ ဗီ ပဲ ဖွင့် ဖွင့် ၊ မ ကြား ချင် လို့မ ရ အောင် ဒီ အ သံ က နေ ရာ တိုင်း မှာ ရှိ နေ သည် ။ နာ ဂစ် ကိစ္စ ဖြစ် လိုက် တော့ လည်း ပြည် ပ ကို အား မ ကိုး ချင် လို့ဘယ် သူ့ကို မှ အ ၀င် မ ခံ ပဲ ကိုယ့် ပြည် သူ ကို အ သေ ခံ စေ ခဲ့ သည် ။ ဒါ လား မျိုး ချစ် စိတ် ။ လူ သာ အ ၀င် မ ခံ တာ ။ ဒေါ် လာ နဲ့ကယ် ဆယ် ရေး ပစ္စည်း တွေ ကို တော့ အဲ ဒီ မျိုး ချစ် ကြီး တွေ က သူ တို့ကို တိုက် ရိုက် ပေး ဖို့တောင်း ခဲ့ တယ် ။ တောင်း သ လောက် မ ပေး လို့တောင် စိတ် ကောက် ပြီး ၊ မ ပေး ချင် နေ ပေါ့ ၊ ဒို့ဗ မာ တွေ က မြက် စား ပြီး ပဲ အ သက် ရှင် နေ နိုင် သ လို လို နှုတ် ခမ်း တစ် လန် ပန်း တ လန် နဲ့ရန် တွေ့လိုက် သေး တယ် လေ ။ ပြည် ပ အား ကိုး ပု ဆိန် ရိုး ကြီး တွေ ။ အ မြဲ ရန် သူ လို ဆက် ဆံ နေ တဲ့ အ မေ ရိ ကန် အ စိုးရ ရဲ့အ ကူ အ ညီ ကယ် ဆယ် ရေး ပစ္စည်း တွေ c130 လေ ယာဉ် ကြီး တွေ နဲ့အပြည့် အ စီး ပေါင်း ရာ ချီ ပြီး ယူ ခဲ့ သေး တယ် ။
ပြည် ပ အား ကိုး ပု ဆိန် ရိုး ကြီး တွေ ။ ကြံ့ ဖွတ် တွေ က ဒါ မျိုး ကို ဘာ ကြောင့် ဘော လုံး ကွင်း ကြီး တွေ ထဲ မှာ စု ဝေး ပြီး ဆန္ဒ မ ပြ တာ ပါ လိမ့် ။ ဒါ ဆို ကျေ နပ် လို့ပေါ့ ။ ပြည် ပ အာ ကိုး ပု ဆိန် ရိုး ကြံ့ ဖွတ် တွေ ။ လို တ မျိုး မ လို တ မျိုး လုပ် နေ တာ သ ဘော ထား မ မှန် တာ ကို ပြ နေ တာ ပဲ ။
ကိုယ် ကျိုး အ တွက် ပဲ ကြည့် နေ ကြ တဲ့ လူ ယုတ် မာ တွေ က အ ကျိုး အ မြတ် တွေ ကြောင့် ညီ ညွတ် နေ ကြ တယ် ။ မျှ စား ရင်း ညီ ညွတ် နေ ကြ တယ် ။ အ မျိုး သား နိုင် ငံ ရေး လို့အ သံ ကောင်း ဟစ် ပြီး( ကိုယ် ဆွေ ကိုယ် မျိုး) နိုင် ငံ ရေး လုပ် နေ ကြ တယ် ။
ဒီ နေ ရာ မှာ တံ ခါး ပိတ် တာ နဲ့ပတ် သက် လို့ပြော ချင် တယ် ။ ဘင်္ဂါလီ စာ ဆို ကြီး ဖြစ် တဲ့( တ ဂိုး ) ရဲ့စာ ပိုဒ် တစ် ခု ဖတ် ဖူး တယ် ။( အ ပုတ် နံ့တွေ ၀င် လာ မှာ စိုး လို့တံ ခါး တွေ ပိတ် ပြီး ထား မယ် ဆို ရင် လေ ပြေ လေ ညှင်း နဲ့အ တူ ၀င် ရောက် လာ နိုင် တဲ့ ရ နံ့သင်း တဲ့ ပန်း ရ နံ့တွေ ကို လည်း ခံ စား ရှူ ရှိုက် ခွင့် ဘယ် မှာ ရ တော့ မှာ လဲ ) ။
စစ် ခေါင်း ဆောင် တွေ က မြန် မာ လူ မျိုး ကို အ နောက် မုန်း ၊ ၀ါ ဒ ရိုက် သွင်း ပြီး ၊ အ နောက် က စီး ၀င် လာ မဲ့ ခေတ် ရေ စီး ကြောင်း ကြီး ကို အ ပုတ် နံ့တွေ လှိုင် နေ တဲ့ ၊ အ သေ ကောင် ပုတ် က စီး ၀င် လာ မဲ့ ၊ အ နိ ဋ္ဌာ ရုံ တွေ လို ပြည် သူ ကို ၀ါ ဒ ဖြန့်ထား တယ် ။ ဘော လုံး ကွင်း တွေ မှာ စု ပြီး ၊ အ င်္ဂ လိပ် ၊ အ မေ ရိ ကန် မ ကောင်း ကြောင်း တွေ ကို အား ရ ပါး ရ အ ပုတ် ချ ပြီး ( ပါ တာ ကို ဖတ် ) စိတ် မ ပါ ပဲ လက် သီး လက် မောင်း တန်း ပြီး ကြွေး ကြော် ကြ ။ ဒါ တွေ လုပ် ဖို့နိုင် ငံ ရဲ့ငွေ တွေ ကို ရေ လို အ သုံး ပြု နေ ကြ တယ် ။ ဒါ က တော့ အ ချိန် ကုန် ၊ လူ ပန်း ၊ ငွေ ကုန် အ မျိုး သား နိုင် ငံ ရေး ပါ ပဲ ။
ပြည် သူ ကို သာ တံ ခါး ပိတ် နေ ။ အ ပုတ် နံ့တွေ ၀င် လာ မယ် လို့ပြော နေ တာ ၊ အဲ ဒီ စေ တနာ ရှင် ကြီး တွေ က တော့ ဗြောင် ကျ ကျ တံ ခါး ဖွင့် ပြီး ပန်း ရ နံ့လေး တွေ ရှူ ရှိုက် နေ ကြ လေ ရဲ့။ အ နောက် က ထွက် သ မျှ ဇိမ် ခံ ကား ၊ အ စား အ သောက် ၊ GSM PHONE ၊ က အ စ မ စင် စွန့်တဲ့ အိမ် သာ ရေ ဆွဲ အိုး ၊ ကန် တော့ ပါ ရဲ့ဗျာ ၊ ချီး ပါ ပြီး ရင် တောင် ဖင် ဆေး ဖို့ဖင် ဆေး အိုး က အ ဆုံး ၊ အ နောက် က ပစ္စည်း ကို ပဲ မက် တယ် ။ American standard ဆို လား ဗျာ ။ ဒေါ် လာ မက် တာ က တော့ မ ပြော ချင် တော့ ပါ ဘူး ။ သူ တို့က မြန် မာ ငွေ တောင် မ ကိုင် ကြ ဘူး ။ ဒေါ် လာ နဲ့ရွှေ ပဲ ကိုင် တာ လေ ။ နှာ စေး တဲ့ ဝေ ဒ နာ လောက် ကို တောင် နိုင် ငံ ခြား မှာ ဆေး သွား ကု တယ် ။ ဈေး ၀ယ် မယ် ဆို ရင် လေ ယာဉ် အ စီး လိုက် နဲ့Singapore , Bangkok တို့လို နေ ရာ သွား ပြီး ဈေး ၀ယ် ကြ တယ် ။ ပြည် ပ အား ကိုး ပု ဆိန် ရိုး စစ် စစ် တွေ က သူ တို့တွေ ပဲ ။
မြန် မာ တိုင်း ရင်း သားတောင် သူ လယ် သ မား တွေ ၊ အ ခြေ ခံ လူ တန်း စား တွေ ၊ အ ဆင့် မြင့် ပ ညာ တွေ မ သင် ကြား နိုင် သူ တွေ ၊ ပြည် ပ နိုင် ငံ တွေ ကို မ ရောက် ဖူး တဲ့ သူ တွေ ဟာ အဲ ဒီ ပိတ် ထား တဲ့ တံ ခါး ရဲ့အ ပြင် မှာ အ ပုတ် နံ့တွေ ချည်း ပဲ လို့ထင် နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ တော် တော် များ များ ရှိ နေ ပါ တယ် ။ သင်း ပျံ့တဲ့ ပန်း ရ နံ့နဲ့တူ တဲ့ ။ ပညာ ရေး ။ကျန်း မာ ရေး ။ လူ့အ ခွင့် အ ရေး ။ နည်း ပညာ ။ စ တဲ့ ကမ္ဘာ့လူ သား တွေ ထိ တွေ့ခံ စား ရှူ ရှိုက် နေ ရ တဲ့ လူ သား တို့အ တွက် ရှိ နေ တဲ့ ခံ စား နိုင် သ မျှ ကို လူ သား တွေ ဖြစ် နေ ပါ လျှက် နဲ့၊ ခံ စား သိ ရှိ ခွင့် မ ရ ကြ ပဲ ၊ လူ့ဘ ၀ ကြီး ကို အ ဆုံး သတ် သွား နေ ကြ ရ တယ် ။ မွေး ပြီး သေ သွား ကြ တယ် ။ ဘာ မှ သိ ခွင့် မ ရ ခဲ့ ကြ ဘူး ။ သူ တို့ပြော တာ ယုံ ၊ သူ တို့ကို ကယ် တင် ရှင် လို ထင် ၊ သူ တို့ခိုင်း တာ လုပ် ပြီး သူ တို့ပေး တဲ့ မ သေ ရုံ လူ့အ ခွင့် အ ရေး လေး နဲ့ပဲ လူ့ဘ ၀ ကို ဒါ ကံ ပေး တဲ့ ဘ ၀ ပါ ပဲ ဆို ပြီး နေ ထိုင် ရင်း လူ မှု ဒုက္ခ အသီး သီး ကို ဆိုး ၀ါး စွာ ခံ စား ရင်း ဘ ၀ ကို အ ဆုံး သတ် နေ ကြ ရ တယ် ။
အဲ ဒီ ထဲ မှာ brainwash အ လုပ် ခံ ထား ရ တဲ့ အောက် ခြေ တပ် မ တော် သား တွေ ပါ ၊ အ ပါ အ ၀င် ပေါ့ ။ အင်္ဂ လိပ် ၊ အ မေ ရိ ကန် ကို မုန်း နေ ရ မယ် ။ ရန် သူ လို့သတ် မှတ် ထား ရ မယ် ။ တိုင်း ပြည် ကို ဖျက် မဲ့ သူ တွေ လို့အ ရိုး စွဲ နေ ရ မယ် ။ ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် တော့ တိုင်း ပြည် ကို ကယ် တင် နေ တဲ့ ကယ် တင် ရှင် တွေ လို သွေး နား ထင် ရောက် အောင် လုပ် ပေး ထား တယ် လေ ။ ဒါ မှ သေ ခိုင်း လို့ရ မှာ ကိုး ။ သ နား စ ရာပါ ပဲ ။ ခြေ ပြတ် လက် ပြတ် ဖြစ် တော့သူ တောင်း စား ဖြစ် ကြ ရ ပြန် တယ် လေ ။
အ ဆိုး ဆုံး က ၊ တ နွယ် ငင် တ စင် ပါ လုပ် ရပ် ပဲ ။ အင်္ဂလိပ် ၊ အ မေ ရိ ကန် မုန်း အောင် ရိုက် သွင်း ထား တဲ့ ၀ါ ဒ နဲ့ တွဲ စပ် ပြီး ၊ ကျ နော် တို့ရဲ့အ မေ ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ကို ၊ ရိုင်း ပြ တဲ့ ၊ ( ကု လား မ ၊ ကု လား မ ယား ) ၊ ဆို တဲ့ အ သုံး အ နှုံး တွေ နဲ့ဆိုင်း ဘုတ် အ မဲ တပ် ပြီး ၊ သင်း ပျံ့တဲ့ အ မေ စု ရဲ့အ ရည် အ ချင်း တွေ ကို မျှ ဝေ ရှူ ရှိုက် ခွင့် မ ရ အောင် တံ ခါး ပိတ် လိုက် တာ ပဲ ။ မ ဖွင့် နဲ့ဒီ ( ကု လား မ ) ဆီ က အ ပုတ် နံ့တွေ ရှူ မိ နေ မယ် ဆို သ လို မျိုး ပေါ့ ဗျာ ။ ၀မ်း နည်း စ ရာ ကောင်း ပါ တယ် ။ တိုင်း ပြည် ကို အ ဆင့် မြင့် အောင် မြှင့် တင် ပေး နိုင် တဲ့ သင်း ပျံ့တဲ့ အ တတ် ပညာ တွေ ၊ နိုင် ငံ တ ကာ ဆက် ဆံ ရေး တွေ ၊ ကမ္ဘာ က လေး စား ရ တဲ့ နို ဘယ် ဆု ရှင် ဆို တဲ့ ဂုဏ် သိ က္ခာ တွေ ၊ စ တဲ့ တန် ဖိုး ကြီး မား တဲ့ နတ် ပန်း ရဲ့ရ နံ့ကို မ ရှူ ရှိုက် ရ လေ အောင် တံ ခါး ပိတ် ထား တာ ပဲ ။ ကြောက် စိတ် နဲ့ပိတ် ထား တဲ့ တံ ခါး ရဲ့အ တွင်း မှာ မြန် မာ ပြည် သူ ပြည် သား တွေ အ သက် ရှူ ကြပ် ပြီး သေ လု ဆဲ ဆဲ ဖြစ် နေ ကြ ရ ပြီ ။ တ ချို့က တော့ သေ ကုန် ကြ ပါ ပြီ ။ ကျန် တဲ့ သူ တွေ ကို ကျ နော် တို့ဒီ အ တိုင်း ကြည့် နေ ရ မှာ လား ။
ဒီ နေ ရာ မှာ ယ နေ့ပညာ တတ် အာ ဇာ နည် တို့ရဲ့အ ခန်းက ဏ္ဍ က ပါ ၀င် မှ ရ တော့ မှာပါ ။တိုင်း ပြည် ၊ လူ မျိုး အ တွက် ၊ မ ဖြစ် မ နေ အ ရေး တ ကြီး လုပ် ဖို့လို ပါ တယ် ။
အ သိ အ မြင် နည်း ပါး နေ တဲ့ ကျ နော် တို့ပြည် သူ တွေ ကို မျက် စိ ဖွင့် ပေး ရ မယ် ။ ပိတ် ထား တဲ့ တံ ခါး ကို ဖွင့် ပေး ရ မယ် ။ တ မျိုး သား လုံး မျက် စိ မ ပွင့် ရင် ကျ နော် တို့မ အောင် မြင် နိုင် ဘူး ။ မီ ဒီ ယာ ရဲ့အ ခန်း ကဏ္ဍ က အ ရေး တ ကြီး ပါ ၀င် လာ ရ ပါ ပြီ ။
ရှင်း အောင် တစ် ခု ပြော ပါ ရ စေ ။ မီ ဒီ ယာ ဆို ရာ မှာ စာ ပေ ဖတ် မှ ၊ ရုပ် သံ ကြည့် ရ မှ ဆို ရင် လည်း အ လွန် အောင် မြင် ဖို့နှေး ကွေး နေ မှာ ပါ ။ စာ ဖတ် နိုင် သူ တွေ ၊ ရုပ် သံ တွေ ၊ အင် တာ နက် တွေ ကို လက် လှမ်း မီ သူ တွေ က ၊ လက် လှမ်း မ မီ သူ တွေ ကို နိုင် သ လောက် တာ ၀န် ယူ ပြီး ၊ ပြော တဲ့ အ လုပ် ( စ ကား ပြော ခြင်း အ လုပ် ) ကို လုပ် ကြ ရ မှာပါ ။ လုပ် မှ ကို ဖြစ် မှာ ပါ ။
ကိုယ့် အ ချင်း ချင်း လေ့ လာ ဆက် သွယ် ရ ယူ ထား တဲ့ information ကို manual သ ဘော မျိုး နဲ့စ ကား ပြော ဖြန့်ချိ ရ မှာ ပါ ။ တ နေ့ကုန် သွား တိုင်း ဘယ် နှစ် ယောက် ကို ဘယ် လောက် မျက် စိ ဖွင့် ပေး နိုင် ခဲ့ သ လဲ ။ ဒီ မေး ခွန်း ကို လည်း နေ့တိုင်း ပြန် မေး ဖို့လို ပါ လိမ့် မယ် ။ မြန် မာ့ နည်း မြန် မာ့ ဟန် နဲ့ချီ တက် ရ မဲ့ ( I T ) စံ နစ် လို့ပဲ ဆို ကြ ရ အောင် ။ ယုံ ယုံ ကြည် ကြည် ဇွဲ ရှိ ရှိ လုပ် ပါ ။ အ ခက် အ ခဲ တွေ အ များ ကြီး တွေ့ပါ လိမ့် မယ် ။ အ တွေ့အ ကြုံ က အာ ဇာ နည် တို့ကို ရင့် ကျက် စေ ပါ လိမ့် မယ် ။ အ သိ အ မြင် နည်း ပါး သူ များ နဲ့စံ နစ် ကောင်း တစ် ခု ကို အ တူ ချီ တက် ဖို့မှာ အ တော် ခက် ပါ တယ် ။ အ မျိုး ကို ချစ် သော အာ ဇာ နည် အ ပေါင်း ရဲ့ပံ့ ပိုး ပါ ၀င် မှု လို အပ် ပါ တယ် ။ ပိတ် ထား တဲ့ တံ ခါး အ ပြင် က သင်း ပျံ့တဲ့ ပန်းရ နံ့လေး တွေ ကို နည်း ပေါင်း စုံ နဲ့အ တွင်း က လူ တွေ သိ ရှိ ရှူ ရှိုက် ခွင့် ရ အောင် အ မျိုး သား ရေး တာ ၀န် တစ် ရပ် အ နေ နဲ့တံ ခါး ဖွင့် တဲ့ အ လုပ် လုပ် ကြ ရ အောင် ။
စိတ် ရှည် ပါ ၊ သည်း ခံ ပါ ၊ ဇွဲ ရှိ ပါ ။ တ နေ့မှာ ကျ နော် တို့မြန် မာ ပြည် သူ တွေ ၊ အ မေ ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ရဲ့သင်း ပျံ့တဲ့ စစ် မှန် သော ရ နံ့ကို ရှူ ရှိုက် ခွင့် ရ ကို ရ ရ မယ် ဆို တဲ့ ယုံ ကြည် ချက် ၊ စေ တ နာ နဲ့နိုင် သ လောက် တာ ၀န် ကို အာ ဇာ နည် တိုင်း က ယူ လိုက် ကြ မယ် ဆို ရင် မ ဝေး သော အ နာ ဂါတ် တွေ မှာ ယဉ် ကျေး သော လူ့ အ ဖွဲ့အ စည်း ကြီး တစ် ခု မြန် မာ ပြည် မှာ မ လွဲ မ သွေ ပေါ် ပေါက် မ လာ နိုင် ဘူး လို့ဘယ် သူ ပြော နိုင် မှာ လဲ ခင် ဗျာ ။ ( စိတ် ဓါတ် မ ကျ တဲ့ အ နာ ဂတ် တိုင်း မှာ အောင် မြင် မှု ရှိ တယ် ) ( တစ် ယောက် မှ သည် အ များ ဆီ သို့manual မီ ဒီ ယာ ဖြင့် တွဲ စပ် ကြ ပါ စို့)
( မြန် မာ့ နည်း မြန် မာ့ ဟန် မြန် မာ့ မီ ဒီ ယာ ဖြင့် မြန် မာ ပြည် ကို ကယ် ကြ ပါ စို့)
ဘုန်းဘုန်းတို့ နဲ့ တသွေးထည်းအတူ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:08 PM0comments
ကနေဒါ ရောက် ဒေါင်းတွေ လည်း..နီပါတယ်ဗျို့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:04 PM0comments
RED POSTER COMPIAGN (8888)
Posted by ဒီရေ at 11:13 AM0comments
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက လှည့်လည်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာသမား တွေ လိုက်ခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံးခရီးစဉ်မှာ ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲနဲ့ လပွတ္တာမြို့နယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဖျာပုံခရီးစဉ်ကို မြန်မာ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်သူက ဦးဆောင်ပြီး ဂျပန်သံအမတ်၊ အမေရိ ကန်စစ်သံမှူးနဲ့ ရိုက်တာနဲ့ ဆင်ဟွာတို့က သတင်းသမားတွေ ပါဝင်တယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ မနေ့တုန်းကတော့ ကုလ သမဂ္ဂ လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အကြီးအကဲ ဂျွန် ဟုမ်းမ်စ် (John Holmes) က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လှူဒါန်း ငွေတွေဟာ ၂၅% အထိ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေရတယ်လို့ ၀န်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားငွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ FEC ခေါ် နိုင်ငံခြားငွေလဲလက်မှတ်နှုန်းနဲ့ လဲလှယ်ရ တဲ့အတွက် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းလောက် ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို နယူး ယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာ မနေ့ က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း မစ္စတာဟုမ်းမ်စ်က ပြောကြားခဲ့တာပါ။ တစ် FEC ဟာ ပြင်ပပေါက် ဈေးထက် ၂၅% လျော့နည်းနေတယ်၊ ဒီပြဿနာကို မိမိတို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အကြောင်းကြားထား တယ်၊ ဒီကိစ္စ မှာ ဘယ်သူအမြတ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာ သူ့အနေနဲ့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မသိဘူးလို့ မစ္စတာဟုမ်းမ်စ်က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ သူ့အတွက် ဘဏ္ဍာငွေရဖို့အတွက် အတော်နိမ့်တဲ့ငွေလဲနှုန်းကို အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာက ကူညီထောက်ပံ့တာတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တဲ့ အပေါ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ငွေ လဲလှယ်နှုန်းကြောင့် နိုင်ငံ တကာကပေးတဲ့ အကူအညီတွေ သိသာတဲ့ ပမာဏအတိုင်းအတာနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရ တာ ကို ကုလသမဂ္ဂက ၀န်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားတဲ့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကို တားဆီးကာကွယ်ဖို့၊ ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ တိုက်ဖျက်ဖို့တွေမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးအကူ အညီနဲ့ FAO ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပါတယ်။
နှစ်ဖက်သဘောတူ သုံးနှစ်စီမံကိန်းတခုကို FAO နဲ့ မြန်မာ့မွေးမြူရေးနဲ့ ကုသရေးဦးစီး ဌာနတို့ကြား လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 9:00 AM0comments
ကဲ ဒို့ဘိူးဘွားအမွေအနှစ်..ဒီတိုင်းဘဲ ရေတိမ်နစ်ခံမလား
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စင်ကာပူဘုန်းကြီး ခိုးယူ
စင်ကာပူနိုင်ငံ ဗုဒ္ဒအံတော်သိမ်ကျောင်း ၀က်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့
http://www.btrts.org.sg/Eng_Content/About_BTRTS/About_Origin.html ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့က အများသူငါက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ဓာတ် တစ်ဆူလို့ အစဉ်အလာ လက်ခံထားကြတဲ့ အံတော်ဓာတ် တစ်ဆူဟာ ယခု စင်ကာပူနိုင်ငံက ဘုန်းကြီး ရှီဖာကြောင် (Shi Fazhau) ရဲ့ လက်ထဲကို ရောက်ရှိလို့ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး ရှီရဲ့ ၀က်ဆိုက် အရတော့ မြောက်ဦးမြို့က ဘုန်းတော်ကြီး ဦးစက္ကပါလက သူ့ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါတဲ့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံက သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်တစ်ခု ကို ယခုလို လက်ဝယ်ထားတာဟာ ဘုန်းတော်ကြီး ရှီအတွက် ၀ိနည်း သိက္ခာနဲ့ ညီတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခု တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအက်ဥပဒေအရ အခုလို နှစ်ပေါင်း များစွာ သက်တမ်းကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို မြန်မာပြည်ကနေ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုသို့ တရားမ၀င် ယူဆောင်သွားခြင်းဟာ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေလို့ပါပဲ။
ဘုန်းကြီး ရှီဖာကြောင်က လက်ဆောင်ရရှိတယ်လို့ သူ့ဝက်ဆိုက်မှာတော့ ဆိုထားလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလုထု အားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းအမွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘုန်းကြီး ရှီ သိဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားရာ အံတော်ဓာတ်ဟာ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးမြို့က ဘုန်းကြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာပြည်သူ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် မြောက်ဦးက ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အမွေအနှစ်ကို ပြည်ပဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို လက်ဆောင် မပေးနိုင်သလို ဘုန်းကြီး ရှီအနေနဲ့လဲ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မသင့်လျော်ပါဘူး။ မြန်မာပြည် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအက်ဥပဒေအရ အခုလို မြန်မာပြည်ကခိုးထုတ်သွားတာဟာ အပြစ်ရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေနဲ့ မြောက်ဦးက ရရှိခဲ့တဲ့ သတင်းများအရကတော့ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ အံတော်ဓာတ်ကို မြောက်ဦးဘုန်းကြီးဆီကနေ စင်ကာပူ ဘုန်းကြီး ရှီဖာကြောင် ၀ယ်ယူသွားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင် မင်းနေပြည်တော် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြောက်ဦးမြို့မှာ အများက အံတော်လို့ လက်ခံထားကြတဲ့ အံတော်ဓာတ် နှစ်ဆူရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ၁၆ ရာစု ဘုရင်မင်းဗာကြီး တည်ထားခဲ့တဲ့ အံတော်သိမ်မှာ ကိန်းဝပ်တဲ့ အံတော်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ပုဂံတောင်က အံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အံတော်နှစ်ခုစလုံးဟာ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးမြို့က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထိုင်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကိန်းဝပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အံတော်နှစ်ဆူစလုံးကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တုန်းက ရှီဖာကြောင်က ၀ယ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံတောင်က အံတော်ကို ယူဆောင်သွားစဉ် က ဘယ်သူမှ မရိပ်မိလိုက်ကြပေမဲ့၊ ဒုတိအကြိမ် ဘုန်းကြီးရှီရဲ့ တပည့်များ အံတော်သိမ်က အံတော်ကို သယ်ယူရာမှာတော့ စစ်တွေ လေဆိပ်မှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ဓာတ်လို့ပြောနေကြတဲ့ အဲဒီ အံသွား စင်ကာပူကိုရောက်ရှိသွားပြီး၊ ၀က်ဆိုက်မှာ ကြေညာလိုက်စဉ်မှာ တော့ သွားဖက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတွေကြားမှာ လေ့လာသုံးသပ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Dr Pamela Craig, (University of Melbourne/ School of Dental Science, Australia) နဲ့ Professor David Whittaker (Cardiff University, Britain) တို့ကတော့ အခု အံသွားဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အံသွား မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ သုံးသပ်ချက်က ၂၀၀၇ ခု ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် The Nation သတင်းစာမှာ ပါရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ကန်ဒ တက္ကသိုလ်က ရခိုင် သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ အေးချမ်းကလဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်အစစ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သံသယရှိကြောင်း wao-mail group မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အခု စင်ကာပူကို ရောက်နေတဲ့ အံတော်ဓာတ်မူလကိန်းဝပ်ခဲ့ရာ ပုဂံတောင်စေတီဟာ မြောက်ဦးခေတ် (၁၄၃၀-၁၇၈၄ အေဒီ) အတွင်း တည်ထားခဲ့တာဖြစ်လို့ ဒီအံတော်ဓာတ်ရဲ့ ကိုးကွယ်မှု သက်တမ်းဟာ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းအက်ဥပဒေအရ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သက်တမ်း ရှိတဲ့ မည်သည့်ပစ္စည်းကို မဆို ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုစင်ကာပူ ၀က်ဆိုက်က တရားဝင်ကြေညာနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့က အံတော်ဟာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
ဒီတော့ခါ မြန်မာပြည်ရဲ့ သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုကို စင်ကာပူဘုန်းကြီး ရှီဖာကြောင် တရားမ၀င်ယူဆောင်သွားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ ဥပဒေနဲ့ မငြိစွန်းနေဘူးလားဗျာ။ ။ ကိုင်း.... စင်ကာပူက ရွှေမြန်မာတွေဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ သွားပြီးတော့ပဲ ဖူးကြမလဲ၊ ဥပဒေကြောင်းအရပဲ ကန့်ကွက်ကြမလား။ ။
Posted by အာဇာနည် at 5:44 AM0comments
စင်ကာပူနိုင်ငံ ဗုဒ္ဒအံတော်သိမ်ကျောင်း ၀က်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ http://www.btrts.org.sg/Eng_Content/About_BTRTS/About_Origin.html ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့က အများသူငါက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ဓာတ် တစ်ဆူလို့ အစဉ်အလာ လက်ခံထားကြတဲ့ အံတော်ဓာတ် တစ်ဆူဟာ ယခု စင်ကာပူနိုင်ငံက ဘုန်းကြီး ရှီဖာကြောင် (Shi Fazhau) ရဲ့ လက်ထဲကို ရောက်ရှိလို့ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး ရှီရဲ့ ၀က်ဆိုက် အရတော့ မြောက်ဦးမြို့က ဘုန်းတော်ကြီး ဦးစက္ကပါလက သူ့ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါတဲ့။
အခု စင်ကာပူကို ရောက်နေတဲ့ အံတော်ဓာတ်မူလကိန်းဝပ်ခဲ့ရာ ပုဂံတောင်စေတီဟာ မြောက်ဦးခေတ် (၁၄၃၀-၁၇၈၄ အေဒီ) အတွင်း တည်ထားခဲ့တာဖြစ်လို့
ဒီအံတော်ဓာတ်ရဲ့ ကိုးကွယ်မှု သက်တမ်းဟာ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းအက်ဥပဒေအရ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သက်တမ်း ရှိတဲ့ မည်သည့်ပစ္စည်းကို မဆို ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုစင်ကာပူ ၀က်ဆိုက်က တရားဝင်ကြေညာနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့က အံတော်ဟာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
ထိုင်းဝန်ကြီး ဟင်းချက်ကောင်းလို့သူလာလည်မယ်တဲ့
ျဗမာ ၀န်ကြီးချုပ်လာလည်တော့ ထိူင်းဝန်ကြီးချုပ်က..ထမင်း ကိုယ်တိုင်ချက်ကြွေးသတဲ့...ချစ်နေကြပုံများ..
အခု bush လာလည်တော့ရော..
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 28 2008 21:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
Posted by အာဇာနည် at 1:18 AM0comments
Responding to Strategies & Program of Burma Gov - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Responding to Strategies & Program of Burma Gov
PinLon Agreement 12 Feb 1947 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: PinLon Agreement 12 Feb 1947
Posted by အာဇာနည် at 11:06 PM0comments
မေ့လို့ရမလား...သွေးစွန်းခဲ့တဲံ နေ့ ဆီ
8888 PTJ - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: 8888 PTJ
ဂျပန်ကနာဂစ်လေဘေး ရံပုံငွေပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ဗမာငွေ သိန်း (၄၀)ကျော်ကောက်ခံရရှိ သွားတဲ့ နာဂစ်လေဘေးသင့် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရံပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
Posted by kyaw kyaw naing at 4:09 PM0comments
သူခိုးလက်ခံ သစ္စာဖောက်များကို ဖေါ်ထုတ်ခြင်း
Published: July 29 2008 03:00 Last updated: July 29 2008 03:00
Activists pressing for an end to military rule in Burma have accused global insurance groups of "underwriting" the Burmese junta by directly and indirectly insuring businesses that provideacash lifeline for the generals.
Inareport entitled "Insuring Repression", the Burma Campaign UK urges global insurance companies, including Lloyd's of London and Japan's Tokio Marine, to pledge to stop underwriting policies issued by state-owned Myanma Insurance, the monopoly provider of insurance policies in Burma. The report says global insurers have facilitated businesses such as airlines, natural gas pipelines, and ports and shipping services, which provide cash to the regime.
Johnny Chatterton, the report's author, said the insurance industry's secrecy made it difficult to determine the companies' precise interests in Burma.
The group called on large insurers to clarify their interests and on the European Union to impose sanctions that would prohibit insurance companies in member countries from doing business with Myanma Insurance or insuring entities in Burma.
Already, 11 of the world's top 30 insurance companies are prohibited by US financial sanctions from doing Burma-related business.
Lloyd's said: "A very small amount of reinsurance is written at Lloyd's in Burmese shipping and aviation. We are unaware of any -businesses at Lloyd's defying international sanctions. If we discovered any underwriters breaching sanctions, we would take action immediately."
Tokio Marine said it could not comment on the issue.
Posted by အာဇာနည် at 12:44 PM0comments
မီးလိုပြင်းထန်တဲ့ နှစ် ၂၀ ပြည့် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ
Posted by အာဇာနည် at 12:36 PM0comments
့ပါမောက္ခချုပ် ၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်
်ရက်စွဲ။ ။ 28-7-2008
အကြောင်းအရာ။ ။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်းများအား အတင်းအကျပ်လိုက် နာခိုင်း နေခြင်း များအား တားဆီးပယ်ဖျက်ပေးပါရန် တင်ပြခြင်း။
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ကျောင်းဝင်းအတွင်းကျောင်းသားကဒ်မချိတ်ပါက ” နောက် နောင် ကျောင်းသားကဒ်ချိတ်ပါမည်၊ ပါမောက္ခမှခေါ်ယုဆုံး မပြီးဖြစ်ပါ သည် ဟု ကိုယ်တိုင်ရေးသား ခံ ၀န် လက် မှတ် ရေး ထိုးခိုင်းခြင်း၊ အကယ်၍့ ကျောင်းသားကဒ် မချိတ်ဆွဲပါက အဆောင်ထဲသို့ ပေးမ၀င် ခြင်း။ ၄င်းအပြင် ကျောင်း အတွင်း အနက်ရောင်ပါသော အ၀တ်အစား မ၀တ်ရဟု စည်းကမ်း ထုတ်ခြင်း အကယ်လို့ ဝတ် ဆင်မိ ပါက ကျောင်းအတွင်းသို့ ပေးဝင်သော်လည်း အဆောင်အ တွင်း ပေးမ၀င်ပဲ စာသင်ယူခွင့် ကိုပိတ် ပင် တားဖြစ်နေခြင်း။ စသည့် စည်းကမ်းချက်များသည် ကျတော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်မလို လားအပ်သော စည်းကမ်းချက်များဖြစ်သည် ဟု ကျတော်တို့အနေဖြင့် သုံးသပ်မိပါ သည်။
သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုရဆိုသည့် စည်းကမ်းကို ကျောင်းသားအများစုမှ လက်ခံ နိုင် ဘွယ်ရာရှိသော်လည်း မြန်မာ့ ရိုးရာ ၀တ်စုံဖြစ်သော ယောလုံချည်၊ ယော ထမီ တို့ ကို အနက်ရောင် ပါသည့် အ တွက် ၀တ်ဆင်ခြင်းမပြု ဟုဆိုသော အချက်မှာ လည်း လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ သို့ အပြင် အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များသည် အေးချမ်းစွာ ပညာ သင် ကြား လိုသော ကျောင်းသားများ အား မကျေမ နပ်ဖြစ်စေခြင်းမှ တဖန် ဆရာနှင့် တပည့် များ အကြား မလိုလား အပ်သော တင်းမာမှု များဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။သို့ အတွက် တက္ကသိုလ်အဆင့် တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များ မှာ မလိုလားအပ်သော စည်းကမ်း များဖြစ် နေပြီးကျောင်းသားများ အတွက် လွတ်လပ်စွာ ၀တ်စား ဆင်ယင်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးနေခြင်းနှင့် ကျောင်း အတွင်းကျောင်းသားကဒ် မချိတ်ပါက အဆောင်တွင်းဝင်ပြီး ပညာသင်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံရမည် ဆိုသည့် စည်းကမ်းသည်လည်း တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများ အတွက် ကျောင်းဝင်းအတွင်းလွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ယူပိုင် ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်နေပါသဖြင့် ထိုသို့ အတင်းအကျပ် ပြုလုပ်ပြီး မလိုက်နာမနေရ စည်းကမ်းများ ချမှတ်နေခြင်းကို လာမည့် ကျောင်း သီတင်းပါတ်အတွင်း အမြန်ဆုံး တားဆီးပါယ်ဖျက်ပေး ပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
့ (http://www.laminkhin.blogspot.com/) မှ
Posted by အာဇာနည် at 6:51 AM0comments
သန်း ရွှေ ဟာ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တစ် ယောက်၊ ( ဒါ ပေ မဲ့ ) မြန် မာ နိုင် ငံ သား အား လုံး ဟာ သန်း ရွှေ မ ဟုတ် ဘူး ။
င်္ ခေါင်း စဉ် လေး ကို တွေး မိ တယ် ။ စာ ရေး ဆ ရာ တစ် ဦး ရဲ့အ တွေး တစ် ခု က နေ ကူး စက် သွား တဲ့ ခေါင်း စဉ် က လေး ပါ ။ စိတ် ဓါတ် မြှင့် တင် မှု လေး တစ် ခု ပါ ပဲ ။
မြန် မာ့ သ မိုင်း မှာ မြန် မာ ဆို တာ ကို ဂုဏ် သိက္ခာ ရှိ အောင် မြှင့် တင် ခဲ့ ကြ တဲ့ ၊ နိုင် ငံ ကို ဦး ဆောင် လမ်း ပြ တိုက် ပွဲ ၀င် ခဲ့ သူ တွေ ကြောင့် မြန် မာ ရယ် လို့ဂုဏ် ယူ ခဲ့ ရ တဲ့ ကာ လ တွေ ဟာ ဟိုး ဝေး ဝေး က အ တိတ် တွေ မှာ ကျန် ခဲ့ ပါ ပြီ ။ မြန် မာ ပြည် ကို အစ ဦး ပျက် စီး ရေး လမ်း ကြောင်း ပေါ် ကို ရောက် အောင် တင် ပေး ခဲ့ သူ က တော့ ( ဦး နေ ၀င်း ) ဆို တာ ဘယ် သူ မှ မ ငြင်း နိုင် ပါ ဘူး ။ အ ရပ် သား အုပ် ချုပ် ရေး စံ နစ် ကို စံ နစ် တ ကျ စ ပြီး ဖျက် ဆီး ပစ် ခဲ့ တယ် ။
စစ် တပ် အုပ် ချုပ် ရေး ကို အ သက် သွင်း ပေး ခဲ့ တယ် ။ စစ် တပ် က ဘောင်း ဘီ ချွတ် တွေ နဲ့ဖွဲ့စည်း ထား တဲ့ အ ယောင် ဆောင် အ ရပ် သား အ စိုး ရ အုပ် ချုပ် မှု စံ နစ် ကို လည်း သူ ပဲ လမ်း ပြ ခဲ့ တယ် ။ တိုင်း ပြည် စီး ပွါး ကို ကိုယ် ပိုင် လို လုပ် ပြီး ကမ္ဘာ လှည့် ပြီး သုံး ဖြုန်း ပြီး မြန် မာ ငွေ တန် ဘိုး ကို လျော့ ကျ အောင် တိုင်း ပြည် ခေတ် နောက် ကျ အောင် တံ ခါး ပိတ် တဲ့ ၀ါ ဒ တွေ ကို လည်း သူ က စ ခဲ့ တာ ပဲ ။ ပ ညာ ရေး စံ နစ် နိမ့် ကျ အောင် ၊ စမ်း သပ် ပ ညာ ရေး တွေ အ မျိုး မျိုး နဲ့လူငယ် တွေ ကို ဓါတ် ခွဲ ခန်း ထဲ က ကြွက် က လေး တွေ လို ဘ ၀ ဆုံး အောင် စမ်း သပ် ပစ် လိုက် တာ လည်း သူ က စ တာ ပါ ပဲ ။
ဆ ရာ မွေး ၊ တ ပည့် မွေး ၊ အ ထက် ဖါး အောက် ဖိ ၊ အ ဆင့် ဆင့် အ ထက် ကို လိမ် ညာ ပြီး စာ ရင်း အ မှား တွေ တင် ပေး ပြီး ၊ မ သ မာ တဲ့ လာဘ် ပေး လာဘ် ယူ စံ နစ် တွေ နဲ့ရာ ထူး တက် အောင် လုပ် တဲ့ နည်း တွေ ကို အ သက် သွင်း ပေး ခဲ့ တယ် ။ အ ဆိုး ဆုံး က တော့ ဦး နေ ၀င်း ဟာ သူ နဲ့ပုံ စံ တူ စ ရိုက် တူ တဲ့ နေ ၀င်း ပေါင်း များ စွာ ကို သူ ရဲ့စစ် တပ် ထဲ မှာ မွေး ထုတ် ပြီး ၊ မြန် မာ ပြည် ကြီး ကို အောက် ဆုံး အ ဆင့် ရောက် သွား အောင် ဆက် လက် ဖျက် ဆီး စေ ခဲ့ တာ ပဲ ။
သူ့အ မွေ ကို ဆက် ခံ ခဲ့ ကြ တဲ့ သူ့ရဲ့မျိုး ဆက် စစ် အုပ် စု မှာ လက် စောင်း အ ထက် ဆုံး ၊ ဖျက် စွမ်း အား အ မြင့် ဆုံး က တော့ ၊ မြန် မာ ပြည် ကို ဖါ နိုင် ငံ အ ဆင့် ရောက် အောင် ပို့ပေး နိုင် ခဲ့ တဲ့ ၊ မြန် မာ စစ် စစ် အ ညာ သား ( သန်း ရွှေ ) ပါ ပဲ ။ အဲ ဒီ လူ
သန်း ရွှေ ဟာ မြန် မာ နိုင် ငံ သား ဆို တာ မြေ ကြီး လက် ခတ် မ လွဲ မှန် ပါ တယ် ။
မြန် မာ မှန် ပေ မဲ့ မြန် မာ လူ မျိုး ကို သူ ကိုယ် တိုင် ပဲ ။ သူ တောင်း စား ၊ ကျွန် ၊ ဒုက္ခ သည် ၊ ဖါ ၊ ဘ ၀ တွေ ရောက် အောင် လုပ် ခဲ့ တယ် ။ နိုင် ငံ တစ် ကာ မှာ ယ နေ့မြန် မာ ဆို တာ အောက် တန်း နောက် တန်း ကျ နေ တဲ့ သူ တောင်း စား သာ သာ ပုံ စံ မျိုး နဲ့ဆက် ဆံ တာ ခံ နေ ရ ပြီ ။ passport အ နီ ရောင် ဖြစ် တာ ခြင်း က တူ ပေ မဲ့ japan နဲ့မြန် မာ လူ မျိုး တို့ရဲ့ဘ ၀ က တော့ ၊ မိုး ကောင်း ကင် နဲ့မြေ ကြီး လို ကွာ ခြား နေ ခဲ့ ပါ ပြီ ။
မြန် မာ ပြည် အ တွင်း မှ တိုင် ရင်း သား အ မျိုး သ မီး လေး များ ၊ အ နှိပ် ခန်း ၊ ပြည့် တန် ဆာ အ ခန်း များ ရောက် သွား သ လို ၊ passportအ နီ ရောင် ကိုင် မြန် မာ တိုင်း ရင်း သူ လေး များ လည်း ပြည် ပ နိုင် ငံ များ ၏ ပြည့် တန် ဆာ အ ခန်း များ တွင် တွေ့နေ ရ ပါ ပြီ ။ အ မျိုး ကို ဖျက် လိုက် ပါ ပြီ ။ ဖါ ဇာတ် သွင်း လိုက် ပြီ ။
အ စဉ် အ လာ ကိုး ကွယ် လာ ခဲ့ သော မြန် မာ နိုင် ငံ သား တို့၏ ထေ ရ ၀ါ ဒ ဗု ဒ္ဓ ဘာ သာ ကို လည်း ၊ စစ် တပ် ၏ သြ ဇာ ခံ ၊ အ ခါ ပေး များ နှင့် ဖွဲ့စည်း ထား သည့် ၊ စစ် တပ် ၀ါ ဒ ဗု ဒ္ဓ ဘာ သာ အ ဖြစ် ဇာတ် သွင်း လိုက် ပြန် ပါ သည် ။ ဘာ သာ ကို ဖျက် လိုက် ပါ ပြီ ။ ဗု ဒ္ဓ ၏ အ ဆုံး အ မ သြ ၀ါ ဒ များ ဖြစ် သော ၊ သာ သ နာ တော် ကြီး ကို လည်း ၊ စစ် တပ် ၏ အ ခါ ပေး ဗေ ဒင် ဆ ရာ များ ၏ ဓါတ် ရိုက် ၊ ယ တြာ ချေ ၊ န ၀ ရတ် ကိုး ပါး လက် စွပ် ဓါတ် ဆင် ပြီး ၀တ် စေ သော(တ ပ ) အ ယူ မိစ္ဆာ ဒိ ဋ္ဌိ အ ယူ များ ဖြင့် ၊ ကွယ် စေ ခဲ့ ပါ ပြီ ။ သာ သ နာ ကို ဖျက် လိုက် ပါ ပြီ ။
အ မျိုး ။ ဘာ သာ ။ သာ သ နာ ကို ဖျက် လိုက် ပြီ ဖြစ် သော သန်း ရွှေ သည် မြန် မာ နိုင် ငံ သား ဖြစ် ပါ သည် ။ သို့ပေ မဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တိုင်း က တော့ ၊ အ မျိုး ဖျက် ၊ ဘာ သာ ဖျက် ၊ သာ သ နာ ဖျက် များ မ ဟုတ် ကြ ပါ ။ အ ရေး အ ခင်း ပေါင်း များ စွာ ကို ဖြတ် သန်း ရင်း ၊ ရက် စက် မှု ၊ လူ မ ဆန် မှု များ နှင့် ပြည့် နှက် နေ သော မြန် မာ ပြည် အ ကြောင်းကမ္ဘာ က ကောင်း ကောင်း သိ နေ ပါ ပြီ ။ မင်း တို့မြန် မာ တွေ ဟာ တိ ရစ္ဆာန် တွေ လို လူ မ ဆန် ရိုင်း စိုင်း သော လူ မျိုး တွေ လား လို့တိုင်း တ ပါး သာ တွေ က မေး ခွန်း ထုတ် လို့နေ ပါ ပြီ ။
ကမ္ဘာ့သ မိုင်းတွင် အ သိ ဥာဏ် ကြီး သော လူ များ သာ ကျင့် ကြံ အား ထုတ် နိုင် သော ဗု ဒ္ဓ အ မွေ စစ် စစ် ကို ကာ လ ကြာ ရှည် ၊ နှစ် ပေါင်း ထောင် ချီ အောင် ထိန်း သိမ်း ခဲ့ သော မြန် မာ တွေ သည် လူ စစ် စစ် ၊ လူ ယဉ် ကျေး များ ဖြစ် သည် ဆို တာ မ မှား နိုင် ပါ ။ သို့အ တွက် ကမ္ဘာ့အ လည် မှာ အ မှန် တ ရား ပြန် လည် ရ ရှိ ဖို့ရာ အ တွက် တိုင်း ပြည် နှင့် လူ မျိုး ကို ချစ် သော အာ ဇာ နည် တို့ကြိုး စား ကြ ရ ပေ မည် ။ သူ ယုတ် မာ နှင့် သူ တော် ကောင်း ကွဲ အောင် လုပ် ပြ ကြ ရ ပေ မည် ။
သန်း ရွှေ ဟာ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တစ် ယောက် ဖြစ် ပေ မဲ့ ၊ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တိုင်း ဟာ သန်း ရွှေ မ ဟုတ် ဘူး ။
ကြံ့ ဖွတ် တွေ ၊ စွမ်း အား ရှင် တွေ ဟာ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တွေ ဖြစ် ပေ မဲ့ ၊ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တိုင်း က ကြံ့ ဖွတ် ၊ စွမ်း အား ရှင် တွေ မ ဟုတ် ဘူး ။
ပြည့် တန် ဆာ အ ခန်း တွေ မှာ မြန် မာ မ လေး တွေ ရှိ နေ ပေ မဲ့ ၊ ပြည့် တန် ဆာ တိုင်း က တော့ မြန် မာ မ ဟုတ် ဘူး ။
ပြည် သူ ကို သတ် နေ တဲ့ တပ် မ တော် သား တွေ ဟာ မြန် မာ့ တပ် မ တော် က မှန် ပေ မဲ့ ၊ မြန် မာ့ တပ် မ တော် သား တိုင်း က တော့ ပြည် သူ ကို မ သတ် ဘူး ။
နောက် ဆုံး ပြော မယ် ကမ္ဘာ ပေါ် က စူ ပါ နို ဘယ် ဆု ရှင် က ငါ တို့တိုင်း ပြည် မှာ ရှိ တယ် ။
ငါ တို့လူ မျိုး ဟာ ဒီ လူ မ ဟုတ် တဲ့ မိစ္ဆာ တွေ ကြောင့် အောက် တန်း ကျ နေ ရ တယ် ။ လူ မျိုး တစ် မျိုး လုံး ညံ့ ဖျင်း လို့မ ဟုတ် ဘူး ။ ဆု အ များ ဆုံး နို ဘယ် ဆု ရှင် ဟာ ငါ တို့မြန် မာ နိုင် ငံ သား ပဲ ။ ဒီ လို ထူး ချွန် တဲ့ သူ တွေ ရှိ တယ် ။ တိုင်း ပြည် ရဲ့အ နာ ဂတ် ကို ကယ် တင် ဖို့၊ မျိုး ချစ် အာ ဇာ နည် တိုင်း မှာ တာ ၀န် ရှိ တယ် ။
ငါ တို့နိုင် ငံ ရဲ့မိ ခင် ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ကို န မူ နာ စံ ထား ပြီး ၊ ငါ တို့တိုင်း ပြည် လွတ် မြောက် ရေး အ တွက် မ ဆုတ် မ နင့် ဆက် ပြီး ကြိုး စား ကြ ရ မယ် ။နိုင် ရာ တာ ၀န် တွေ ယူ ကြ ရ မယ် ။ မြန် မာ ပြည် သား တွေ ထဲ မှာ ဒေါ်အောင် ဆန်း စု ကြည် လို လူ မျိုး ၊ကို မင်း ကို နိုင် တို့လို လူ မျိုး တွေ အ များ ကြီး ရှိ တယ် ဆို တာ ပြ ကြ ရ မယ် ။
မြန် မာ နိုင် ငံ သားတိုင်း က သန်း ရွှေ မ ဟုတ် တာ ကို ပြ ကြ ရ မယ် ။ အုပ် စု တစ် စု ကြောင့် ကျ ဆင်း နေ ရ တဲ့ အ မိ မြန် မာ ပြည် ကို ကယ် တင် ကြ ရ မယ် ။ အ နာ ဂတ် မြန် မာ လူ ငယ် တွေ အ တွက် သ မိုင်း ကောင်း တွေ ၊ အ မွေ ပေး နိုင် ကြ ရ အောင် အာ ဇာ နည် တို့နိုင် ရာ တာ ၀န် ကို ၊ မ ငြို မ ငြင် ထမ်း ရွက် ပြီး ညီ ညီ ညွတ် ညွတ် ချီ တက် ကြ ပါ စို့။ ယဉ် ကျေး တဲ့ လူ့အ ဖွဲ့အ စည်း ကို ပြန် လည် ထူ ထောင် နိုင် ရန် အ တွက် အာ ဇာ နည် သင့် ကို အ လို ရှိ ပါ သည် ။
( မြန် မာ ပြည် သား တိုင်း က တော့ သန်း ရွှေ မ ဟုတ် ဖူး ဟေ့ ) လို့ကမ္ဘာ ကို ဟစ် ကြွေး ကြ ပါ စို့။
တိုက် ပွဲ ၏ တစ် နေ ရာ မှ
Posted by အာဇာနည် at 6:03 AM0comments
Posted by အာဇာနည် at 2:41 AM0comments
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများ တိုင်ကြားနိုင်ရန် AAPP က စာအုပ်ထုတ်ဝေ
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေခြင်းများ ကို ပြည်သူများအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂသို့ တိုင် ကြား နိုင်ရန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များ ကူညီစောင့်ရှောင့်ရေးအသင်း (AAPP) က စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုများကို တစုံတရာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပြီး အဆိုပါစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း (AAPP) က ပြောဆိုသည်။
စာအုပ်အမည်မှာ “ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိကလုပ်ငန်း ယန္တရားများ(၂၀၀၂)၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ” ဖြစ်ပြီး မူရင်းစာတမ်းကို လန်ဒန်အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့(AI)နှင့် အင်္ဂလန်နှင့် ဝေးလ်စ် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့(The Law Society) တို့မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ပူးတွဲထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စာအုပ်တွင် အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအကြောင်းနှင့် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း စံနစ် (၂၈) ခုနှင့် ဆိုးဝါးစွာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သည့် နိုင်ငံများအား ကိုင်တွယ်အရေးယူနိုင်ရန် အထူး လုပ်ငန်း စံနစ် (၁၃) ခုပါဝင်ပြီး ယခုစာအုပ်အား လူ့အခွင့်အရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကို စိတ်ဝင်စားသူများထံ အဓိက ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
(AAPP)အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က“ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံရ သူကလဲ သူတို့ ဘာအခွင့်အရေးတွေရှိပြီး ဘာတွေချိုးဖောက်ခံနေရတယ်၊ ချိုးဖောက်သူ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ် လို ပုံစံနဲ့လဲ၊ အချက်အလက်ခိုင်လုံအောင် ဘယ်လိုစုဆောင်း မလဲ၊ ဘယ်ကိုတိုင်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုတိုင်ရမလဲ၊ ကုလ သမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက် မှုတွေ လုပ်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ်”ဟု ပြော သည်။
ယခုထုတ်ဝေလိုက်သည့်စာအုပ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရပါက လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အသေး စိတ်အချက်အလက်များအပြင် လူ့အခွင့်အရေချိုးဖောက်ခံရသည့် အခြေအနေအမျိုးမျိုး အတွက် တိုင်ကြားရန် လိပ်စာများကိုပါ ထည့်သွင်းထားသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
Posted by အာဇာနည် at 10:36 PM0comments
ဘုရားဘုရား မနောက်နဲ့နော်..အရွေးတော့မခံပါရစေနဲ့ ဗျာ. ကြံဖွတ်ဝန်ကြီး..ကျုပ်ခေါင်းကြီးတယ်။.
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကြံ့ဖွံ့အသွင်ပြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဖွဲ့ဘို့ နေပြည်တော် ၀န်ကြီး အ ချို့ကိုတာဝန်ပေးမည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံရေးလိုင်းဝင်မည့် ၀န်ကြီးများ ၀န်ကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး အာဏာ လက် လွတ် ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေသည်ဟု နေပြည်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်က ပြော သည်။
အထူးသဖြင့် ၀န်ကြီးအဖွဲ့တွင် အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် နေပြည်တော်စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း လို ၀န်ကြီးတွေပင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် နီးစပ်သည့်တိုင် ရာထူးမှထွက်ပြီး ကြံ့ဖွံ့အသွင်ပြောင်း နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင် လုပ်ခိုင်းမှာ စိုးရိမ်နေသည်ဟု ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
သို့သော် အသက်ကြီးသည့် လက်ရှိဝန်ကြီးတွေကို သက်ဆိုင်ရာဇာတိမြေ တိုင်းအလိုက် ကြံ့ဖွံ့ အသွင်ပြောင်း နိုင်ငံရေး ပါတီ တွေ ဖွဲ့ဘို့ တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် ၀န်ကြီးရာထူး နေရာသစ်များ ပေါ်လာနိုင်သည်- ထို့ပြင် နောက် တက် ဗိုလ်ချုပ်များကို ၀န်ကြီးရာထူး ပေးနိုင်ခြင်း၊ အသက်ကြီး ၀န်ကြီးတွေကို အချိုသတ်ပြီး ရုံခါ နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် နေပြည်တော် ၀န်ကြီးများ ရာထူးလက် လွတ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ရမှာ ထိတ်လန့် နေခြင်း ဖြစ် သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော်ဝန်ကြီးများကို နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ဘို့ တာဝန်ပေးရာတွင် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင် သောင်းကို မန္တလေးတိုင်း နိုင်ငံရေးပါတီ၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီကို ကွမ်းခြံကုန်းစသဖြင့် ၀န်ကြီးများ ဇာတိမြေအလိုက် ကြံ့ဖွံ အသွင်ပြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခေါင်းဆောင်ခိုင်းမှာ ဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းဆိုလျှင် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းများ၌ ဆန္ဒပြသူ များအား ရိုက် နှက် ခိုင်းခဲ့သည့် စွမ်းအားရှင်များကိုလည်း နိုင်ငံရေးပါတီထဲ ၀င်ခိုင်းရန် မယုံသဖြင့် ပင်စင်သွားသည့် ညွှန် ကြား ရေးမှူးများ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာများကို နိုင်ငံရေးပါတီထဲ ၀င်ခိုင်းရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သိရသည်။
၀န်ကြီးရာထူးမှ ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အာဏာမရှိတော့ဘဲ လူထုအရိုက်ခံရမှာကို စက်မှု(၁) ၀န် ကြီး ဦးအောင်သောင်း စိုးရိမ်နေသည်ဟု စက်မှု (၁) အရာရှိများက ပြောသည်။ ။http://www.khitpyaing.org/news/july_08/28-7-08f.php
Posted by အာဇာနည် at 10:17 PM0comments
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ တပ်မ (၈၈) တပ်မမှူးအဖြစ် ကျိုင်းတုံမှာ ရှေ့တန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က Golf ရိုက် နည်း ကို ဗိုလ်မှူးဝင်းလှိုင် (ယခု အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ် ၀င်းလှိုင်) ထံမှ သင်ယူခဲ့ရပြီး စစ်ရေး စစ်ရာမှာလည်း ထက် မြက် ခဲ့သူမဟုတ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း၊ ဗိုလ်လောင်း အပတ်စဉ် (၉) မှာ B.C အမှတ် (ကြည်း - ၆၇၁၀) နဲ့ နောက်ဆုံး ဗိုလ်လောင်းအဆင့်ဖြင့် ဆင်းလာ ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ တပတ်စဉ် ဆင်း တွေက တန်းစီလိုက်ရင် သူ့နောက်မှာ မြက်ခင်းပြင်သာ ရှိတော့ကြောင်း နောက်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဗကပတိုက်လို့ မိုင်းယောင်းမြို့ကျခဲ့စဉ်က ချင်း သနက (၃) တပ်ရင်း လက်နက်ခဲယမ်း ဆုံးရှုံးသွား တဲ့အပြင် ရဲမေများ မုဒိမ်းကျင့်ခံရလို့ သူ့မှာ တာဝန်ရှိတာမို့ ဦးနေ၀င်းအား ဖားရပါတော့တယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ ကျိုင်းတုံမှာ တာဝန်ကျတော့ မှောင်ခိုခေတ်ကောင်းတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေလို့ လေယာဉ် လက်မှတ်တွေကို မှောင်ခိုဈေးဖြင့် ရောင်းချခြင်း၊ စစ်ယာဉ်တန်းတွေ ကျိုင်းတုံ-တောင်ကြီး၊ ကျိုင်းတုံ-တာချီလိတ် အတက်အဆင်း လမ်း ကြောင်း များမှ မှောင်ခို ကယ်ရီခများ ရရှိခြင်းတို့ဖြင့် ပြည်သူလူထုကို လည်မျိုညစ်ကာ ပြည်သူလူထု ကျမျက်ရည်များမှ ရရှိသော ၀င်ငွေများစွာကို ကျိုင်းတုံသို့ စစ်ဆေးရန် ရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းအား ဒလဟော ပံ့ပိုး ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်မှာ “တော်သုံးတော်” ရှိတဲ့ အထဲက အဖားတော်သူ စာရင်းမှာ ပါဝင်အောင် ကြိုးစား နိုင်ခဲ့ပြီး အ နောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးမှတဆင့် သူ့ထက် စီနီယာကျတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ချစ်ဆွေ၊ ဗိုလ်ချုပ် စိန်အောင်တို့ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
န၀တ စတင်ဖွဲ့စည်းခါစက ဗိုလ်စောမောင်နဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့သာ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ လှုပ်ရှားနေကြပြီး ဗိုလ် သန်းရွှေကတော့ န၀တ အဖွဲ့ဝင်ဘ၀နဲ့ ဗိုလ်မောင်လှနဲ့ အတူ စစ်ရေးစစ်ရာကိုသာ ကွပ်ကဲနေ ခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ် သန်းရွှေကို ဗိုလ်စောမောင်က “ကိုသန်းရွှေ စာဖတ်တာ သိပ်မတွေ့ရဘူး၊ လေ့လာဖို့ ကောင်းတယ်” လို့ ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီနောက် အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်တင်ဦးက အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့ တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းပြီး န၀တအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေကို ဒု-ဥက္ကဋ္ဌရာထူးပေးဖို့ ဗိုလ်စောမောင်ထံ တင်ပြပေးခဲ့ရာက နေရာရလာခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ရုရှနိုင်ငံမှာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး (ကကပြည်) မှ လာခဲ့သူပီပီ စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု စည်းရုံးရေးကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်စော မောင်နဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်း တို့ကို နမူနာယူပြီး ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မပြုဘဲ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ခဲ့ရာမှာ နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ဝလှပါတယ်။
ဗိုလ်မောင်အေးကတော့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ညွှန်ကြားရေးမှူးဘ၀နဲ့ နစ်မြုပ်နေပြီ DSA အပတ်စဉ် (၁) (ကြည်း - ၇၈၇၅) ဖြင့် ဆင်းလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဇနီးဟာ စစ်သူနာပြုအရာရှိက လာသူ ဖြစ်ပြီး တပ်မတော် ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရကျော်ထင်ရဲ့ ဆွေမျိုးတော်သူ စစ်သူနာပြု အရာရှိအကြီးအကဲ အမျိုးသမီးကြီးကတဆင့် ချဉ်းကပ်စည်းရုံးကာ နေရာရအောင်တိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းက DSA ကို နေရာပေးဖို့ စီစဉ်ရန် လိုအပ်တယ်လို့ နှုတ်မိန့်ထွက်ခဲ့ရာက အလိုက်အထိုက် သင့်သွား ပြီး တပ်မတော်ရဲ့ လူခင်ရင် မူပြင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားနဲ့အညီ တပ်ရဲ့အစဉ်အလာ အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်မောင်အေးဟာ တပ်မ (၇၇) တပ်မမှူး ရာထူးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ န၀တ ဖွဲ့စည်း ချိန်မှာ သူဟာ အရှေ့ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်မောင်အေးဟာ သူ့ထက် ရာထူးစောစွာ တက်ပြီး တပတ်စဉ်တည်း ဆင်းခဲ့သူ စစ်ရေးထူးချွန်လို့ ရှေ့က ပြေးနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဥာဏ်လင်းနဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး လှမော်တို့ထက် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗိုလ်မောင် အေးက ဖြတ် တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ရာထူးတက်ရေးအတွက် အရာရှိတွေရဲ့ ဇနီးမယားတွေဟာလည်း အရေး ပါတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ န၀တလက်ထက်က တက်လာသူ တွေထဲမှာ သူတို့နှစ်ဦးသာ ရှိတော့လို့ မြန်မာ့နိင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တဖက်တလမ်းက ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ တင်ပြလိုပါတယ်။
“ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားသော်၊ နောက်နွားတသိုက် ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်၏” ဆိုတဲ့ စကားပုံဟာ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ နွားသတ္တ၀ါတွေရဲ့ စရိုက်၊ သဘာဝ၊ သဘော တရားကို ဖြော်ပထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာရှိတဲ့ အရာရှိ ကြီးငယ်တွေဟာ လူသားစင်စစ်တွေ ဖြစ်ကြပါလျက် အ သိဥာဏ်၊ ပညာ၊ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုတွေလည်း ရှိကြပါလျက် နွားတွေလိုပဲ ရှေ့ဆောင်နွားလား ညွှန်ကြား ပြောဆိုရာကိုသာ လိုက်နေကြပါတယ်။
စစ်တပ်က တချို့အရာရှိတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ ဒုက္ခဆင်းရဲ နွံထဲ ရောက်နေတာ၊ တိုင်းပြည်ဟာ အဖက်ဖက်က ပျက်စီးယိုယွင်းနေတာကို သိပေမယ့် ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာ ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ထားနေကြပါတယ်။ တချို့ အရာရှိတွေကတော့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု အမှန်တကယ် လို အပ်နေပြီဆိုတာကို သိကြပါတယ်။
တပ်မတော်အတွင်း၊ အောက်ခြေမှာ ရဲဘော်တွေဟာ သောက်စရာ ရေခွက်တောင် မရှိဘဲ “ခွက် ပျောက်” နေ လို့ စစ်ပြေးတွေ တနေ့တခြား များနေတာကို ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက် (ကကကြည်း) ဒုတိယ စစ်ဆင်ရေး လေးလပတ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအရ တပ်မတခုစာ စစ်သည်အင်အား (၇,၀၀၀) ခန့်ဟာ ထွက်ပြေးနေကြကြောင်း ဖော်ပြထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအောက်မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုဆိုတာ အများကြီး ကန့်သတ်ချက် ရှိပါ တယ်။ နအဖရဲ့ Heartland theory အရ ၀န်ထမ်းအများစုကို ကြပ်ပြေးသို့ သီးခြားခွဲထုတ်ထားတာမို့ သူတို့ရဲ့ အင်အားကိုလည်း မရရှိတော့တာကြောင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုဟာ အရှိန်အဟုန် တန့်နေပါတယ်။ တပ် မတော်အတွင်း လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ တပ်မတော် တစိတ်တ၀မ်းထဲဖြစ်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရေးဟာ တိုင်းချစ် ပြည်ချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း၊ အင်အားစုတိုင်းရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ထောင်ချောက်ထဲမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို အခြေအနေမှန်ကို စည်းရုံးပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။
နအဖကို အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်အောင်၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားအောင် မလုပ်နိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ဒီမိုကရေစီ ရရှိဖို့ဆိုတာဟာ အိပ်မက်တောင် မက်လို့မရတာကြောင့် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေ အားလုံး စည်း စည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဟန်ချက်ညီ လက်ချင်းချိတ်ကြဖို့ အရေးကြီးနေ ပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ်တွေ၊ သားစဉ်မြေးဆက်တွေ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးအောက်က လွတ်မြောက်ဖို့၊ မြင့်မြတ် တဲ့သူ တွေ၊ မှန်ကန်တဲ့သူတွေ၊ တရားမျှတမှုကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေ နအဖရဲ့ အကျဉ်း ထောင်တွေထဲ ရောက် နေ တာ လွတ်မြောက်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေအားလုံးအနေနဲ့ တိုက်ပွဲပုံစံကို ပြောင်းဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
ဘုရားသားတွေ၊ ကျောင်းသားတွေဟာ အမြင့်မားဆုံး စိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြ၊ တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ ကြပြီးဖြစ်လို့ တိုက်ပွဲပုံစံပြောင်းကာ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဟန်ချက်ညီ လက်ချင်းချိတ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 10:06 PM0comments
ဂျပန်က နာဂစ် လေဘေးဒုက္ခသည်များ ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလအတွင်းက မြန်မာပြည်တွင် ဆိုးရွားစွာ တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတဲ့ လေဘေးသင့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဂျပန်ရောက် မြန်မာလူငယ်များမှစုပူးပေါင်း၍ ပြည်တွင်းမှ နံမည်ကျော်အဆိုတော်များကိုဖိတ်ကြားကာ ရန်ပုံငွေ ဂီတဖော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို ဇူလှိုင်လ(၂၇)ရက်နေ့က တိုကျို၊ အိခဲဘုကုရိုမှာရှိတဲ့ ခိုကိုင်းဒိုးခမ်းမဆောင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို မြန်မာပြည်တွင်းမှ အဆိုတော်များဖြစ်တဲ့ ခင်မောင်တိုး၊ Rဇာနည်၊ မေခလာ၊ ရတနာနှင့် အဆိုတော်သစ် မေစံပါယ်ညိုတို့ကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး တေးဂီတမှူးအဖြစ် စန္ဒရားလှထွဋ်၏သား ဂီတမှူးမြတ်မင်းက တီးခတ်ဖျော်ဖြေပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖျော်ဖြေပွဲ ပထပပိုင်းအစီအစဉ်အပြီးမှာ ခင်မောင်တိုး၊ Rဇာနည်နှင့် ဇနီး၊ မေခလာ၊ ရတနာနှင့် အဆိုတော်သစ် မေစံပါယ်ညိုတို့ က ပရိတ်သတ်ထဲသို့ဆင်း၍ အလှုငွေများကို ကိုယ်တိုင်ဆင်းကောက်ခဲ့ကြပြီး
ဒုတိယပိုင်းဖျော်ဖြေမူပွဲအစီအစဉ် နောက်ဆုံးမှာ နာဂစ်လေဘေးသင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကောက်ခံရရှိတဲ့ ဂျပန်ယန်းငွေ ၃၅၂၄၃၁(သုံးသိန်းငါးသောင်းနှစ်ထောင်လေးရာသုံးဆယ့်တစ်)ယန်း ကို ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေကိုယ်စား တာဝန်ရှိတဦးမှ အဆိုတော်များသို့ ပေးအပ်လှုဒါန်းခဲ့ရာ အဆိုတော်မေခလာမှ လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ယခုလို လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လှုဒါန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် ယခုလက်ခံရရှိတဲ့ အလှုငွေများကို မုန်တိုင်းသင့်ဒုက္ခသည်တွေဆီအရောက် သွားရောက်လှုဒါန်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာတော့ အဆိုတော်တွေရဲ့ စီးရီးအခွေတွေကို ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုး ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ယခုပြုလုပ်သွားတဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရံပုံငွေပွဲဟာ လေဘေးသင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိသလို ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေလည်း ကုသိုလ်လည်းရ မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ အဆိုတော်တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကိုလည်း အားရပါးရကြည့် ရှူခံစားနိုင်ကြတာမို့ တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတပွဲဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ရကြောင်း ပရိတ်သတ်ထဲမှ ပြောဆိုသွားတာကို လည်းကြားသိရသလို အဲဒီဖျော်ဖြေပွဲကို ဂျပန်ရောက်မြန်မာ ပရိတ်သတ် ၂၈၀ကျော်ခန့် တက်ရောက်အားပေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။
၂၈ရက်၊ ဇူလှိုင်၊ ၂၀၀၈
Posted by kyaw kyaw naing at 1:27 PM0comments
ဒို့ သွေးစွန်းခဲ့တာ..အခု နှစ် (၂၀)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:19 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 5:23 AM0comments
အသံတွေ ကြားနေရပြီ။ နအဖ ကတော့ ခုထိ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေဆဲ
Posted by အာဇာနည် at 5:12 AM0comments
8888 ကိုမမေ့ ကြစတမ်း
ကျပ်ပြေးက အရှုပ်တော်ပုံများ အပိုင်း ( ၅)
WINC 340-08 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: WINC 340-08
Posted by အာဇာနည် at 2:36 AM0comments
ဘယ်သူက စေတနာထား..ဘယ်သူကဟောက်စား လဲဟေ့
နအဖကတော့..ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းပြီးနေတာကြာပြီတဲ့. ထုံးစံ အတိုင်း အလိမ်ပေါ့ဗျာ..ဖုံးဖိ သွားဖြဲပြတာပေါ့
တကယ်..အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေ ကအသိဆုံးပေါ့..ဘယ်သူတွေ ငတ်နေတာ..
လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွား..နအဖ ဖြတ်စားမှန်းတကမ္ဘာလုံးသိတယ်..
GENEVA (AFP) - Around 700,000 children are in need of long-term aid in Burma due to the devastating effects of May's Cyclone Nargis, the United Nations Children's Fund (UNICEF) said on Friday.
In the crucial days after the cyclone hit, Burma's notoriously secretive leadership blocked access for foreign relief workers, raising fears thousands more people would die after being denied life-saving aid.
The junta only eased its stance afterapersonal visit by UN chief Ban Ki Moon, but aid groups say access to the worst-hit southern delta remains patchy.
Posted by အာဇာနည် at 2:01 AM0comments
ဒေါင်းအိုးဝေ တွန်သံသာဖို့ ..လာကြ ဒို့ အရေးကြွေးကြေ...
ကြိုင်ကြိုင် သောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ မြန်မာခလေး..သူများေ...
ခွေးတွေ ကြောက်လို့ ပြေးရတဲ့ လူတွေ ခွေးသေ၀က်သေ..သေက...
ကဲ ဒို့ဘိူးဘွားအမွေအနှစ်..ဒီတိုင်းဘဲ ရေတိမ်နစ်ခံ...
သန်း ရွှေ ဟာ မြန် မာ နိုင် ငံ သား တစ် ယောက်၊ ( ဒါ ...
ဘုရားဘုရား မနောက်နဲ့နော်..အရွေးတော့မခံပါရစေနဲ့ ဗျာ...
ဂျပန်က နာဂစ် လေဘေးဒုက္ခသည်များ ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ြေ...
အသံတွေ ကြားနေရပြီ။ နအဖ ကတော့ ခုထိ ရူးချင်ယောင်ဆောင...
Stand By Burma - Invitation for August 2, 2008
ဂျပန်က ရံပုံငွေ ဂီတပွဲ
အော် နှစ် ၂၀တောင်ရြှိပီ. 8888..အကျည်းတန်တဲ့နှစ်တွေ...
ဗိုလ်မှုးဟောင်း အောင်လင်းထွဋ္ဋ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (D...
တ နေ့ခွဲ ကြ ရ မှာ ပါ ။
ပေးပေး...ပေးပေး...ဒို့ ငွေတွေ ပြန်ပေး
ရွှေ သတင်းစာစောင် vol:3 issue 4
ဗမာ့အရေး..ဒို့ အရေးဟေ့ ဒို့ သွေးဗမာ..နီရဲပါ။
ပေါချောင်ကောင်း မို့ တွယ်နေကြပြီ။
ထိအောင် ပစ်စမ်းပါလား ဘိုးသကြား..
(စက်ဘီးစီးပြီး လွတ်လပ်ရေးခရီးသွားကြစို့ )
အခက် ပွေနေတဲ့ Asean
၃၀၀၀ မိုင်ခရီးရှည်ချီတက် ရဲဘော် အာဇာနည်များ ခရီးတ...
ရုရှတွေ ဒို့မြေပေါ် မှာနအဖနဲ့ပေါင်း..ဘာတွေ လုပ်နေကြ...
လူဆိုးတွေနဲ့ တိုင်ပင်တဲ့ လူယုတ်မာ။
သွေးပျက်နေတဲ့ ဧရာဝတီက လယ်သမားများ.
လှို့ ဝှက် ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ်
ရံပုံငွေ ပွဲမို့အားပေးကြပါခင်ဗျ
မြန်မာတွေ ပေါက်ကွဲကုန်ကြပြီ။ (မလေးရှား မြန်မာသံရုံ...
ဂျပန် မြန်မာ ပြဿနာ..
မြန်မာ့ သတင်း ဇူလိူင် ၂၃ ရက်၂၀၀၈
သူလို လူ ဘယ်သူရှိသလဲ..ရဲရင်လက်ညှိုးထောင်.
ဒို့ အားလုံးလိုအပ်နေတဲ့ အရာ
နယူးယောက်သို့ မိုင် ၃၀ အကွာ
ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်၏ မြတ်သောဂုဏ်ရည်။
အပျိုလိုချင်သော ခေါင်းညိမ့်တတ်တဲ့ ပုတ်သင်ညိုများ
မြန်မာ့သတင်း ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ၂၀၀၈
ဘော်လကန်ဒေသ၏ ဇာတ်သိမ်းသွားသော သားသတ်သမား
Letter to the Secretary-General and Members of Sec...
ရခိုင် လွတ်မြောက်ရေးတပ် နဲ့ နအဖစစ်တပ် နဲ့တိုက်ပြွဲ...
နယူးယောက်မှ အာဇာနည်နေ့ လှုပ်ရှားမှု ၂၀၀၈
8888 နှစ် (၂၀) ပြည့် အခန်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
ချမ်း သာ တဲ့ စိတ် မ ဖြစ် တာ ဘာ့ ကြောင့် လဲ ?လုပ် ဖ...
ကင်မရာ မကြိုက်တဲ့ မြန်မာ.
စကားမဲ့ အသံမဲ့ အာဇာနည်နေ့ မိန့်ခွန်း (ဗိုလ်ချုပ်အေ...
No 1 Final 02 - ...
ကျောင်းနဲ့ ဝေးတဲ့ခလေးငယ်..ဒီလိူဘယ်နှစ်ယောက် လမ်းပေ...
မြန်မာ့သတင်းဇူလိူင် ၂၁ ရက် ၂၀၀၈